ဧပရယ်လ်ပူး @ ပူးတေ: October 2009
Imperial Herbal နှင့် ဆားချက်ခြင်း
ခုတလော ပူးတေတယောက် အလုပ်တွေအရမ်းရှုပ်နေတယ်... ရုံးမှာလည်း Project တွေအပြီးသတ်နေရလို့ ပါဏာတိပါတကံတွေ ကျူးလွန် အဲလေ... အလုပ်တွေအရမ်းရှုပ်နေသလို အိမ်ရောက်တော့လည်း အမျိုးတွေ ရောက်နေတာနဲ့ ဘလော့ဘက်တောင် ခြေဦးမလှည့်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်။ ပိတ်ရက်ဆိုလဲ လုံးဝမနားရဘူး။ ပူးတေစားချင်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေ လိုက်ပို့နေရလို့ အဲ ယောင်လို့ သူတို့သွားချင်တဲ့နေရာတွေ လိုက်ပို့ပေးနေရတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ကတော့ ဘလော့လေးဆီပဲရောက်နေတာ။ စားလဲ ဒီစိတ်၊ သွားလဲ ဒီစိတ်၊ (နဲနဲပိုကြည့်တာ :P သနားလာအောင်)ဘလော့မရှိခင်တုန်းက ဘလော့လေးတခု လိုချင်လိုက်ရတာ အမော။ ဘလော့လဲရရော ပြန်လှည့်မကြည့်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ လာလည်တဲ့လူတွေကိုလဲ ဧည့်ဝတ်မကျေဖြစ်နေရတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ရေ ဆောရီးနော်။ ဧည့်ဝတ်မကျေခဲ့တာတွေကို တောင်းပန်တဲ့ အနေနဲ့ အမျိုးတွေကို VivoCity ၃ ထပ်က Imperial Herbal Restaurant မှာ လိုက်ကျွေးဖြစ်တာလေးကို သူငယ်ချင်းတို့ကို ဧည့်ခံရင်းနဲ့ ဆားချက်လိုက်တယ်။ :P
ဆိုင်လေးက Herbal ဆိုင်ဆိုတော့ ဟင်းတွေအားလုံးကို chinese herbal တွေ ထည့်ချက်ထားတယ်။ တချို့  herbal တွေက အမျိုးသမီးငယ်တွေအတွက်ကောင်းတယ်၊ တချို့ က အမျိုးသားတွေအတွက်၊ ဆေးမြစ်တွေ ဆေးခေါက်တွေနဲ့ ထည့်ချက်တယ်။ ဆေးတွေဆိုပေမယ့် ဆေးအနံ့အရသာတွေထွက်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ စားကောင်းရုံ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ရုံပါပဲ။ ပူးတေရော မစ္စတာပီရော ဘာဆေးကဘယ်လိုစွမ်းမှန်းတော့မသိပါဘူး။ ဦးလေးတွေ ကြီးဒေါ်တွေ အစ်ကိုတွေကို Menu ပြလိုက်ပြီးသူတို့ စားချင်တာတွေမှာကြတယ်။ ဘကြီးတွေက တရုတ်လိုပြောတတ်၊ဖတ်တတ်တယ်လေ။ သူတို့က Menu ဖတ်ပြီးမှာ။ ပူးတေတို့ ၂ ယောက်လဲ ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး မှာလိုက်တော့အဆင်တော့ ပြေသွားကြတာပါပဲ။
ဆိုင်ကိုလိုက်ပို့ပေးရင်းနဲ့ VivoCity ပါလိုက်ပို့ပြီးသားဖြစ်တာပေါ့။ ရှုခင်းလေးကောင်းတယ်လေ။
(ဒီပုံက ညနေခင်း VivoCity ရောက်ရောက်ချင်း)
ဆိုင်လေးက အပြင်အဆင်လေးရော service ရောကောင်းတယ်။ ဟင်းတွေလဲ ကောင်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပင်လယ်စာတွေ ကောင်းကောင်းရတယ်။ ရန်ကုန်က ဧည့်သည်တွေလာရင် Buffet, BBQ တို့ လိုက်ကျွေးမှာထက်စာရင် ဒီလိုဆိုင်မျိုးလေးတွေမှာ ကျွေးသင့်တယ်လို့။ ရန်ကုန်မှာ ဒါမျိုးမရနိုင်လို့လေ။ ဈေးနဲနဲများပေမယ့် ဒါမျိုးက တခါတလေမှစားရတာဆိုတော့ စားသင့်ပါတယ်။
(ဒါက ညနေခင်း နေဝင်ချိန်လေးကို အမိအရ ဆွဲထားတာ) :D
(ဒါလေးက မှာထားတာတွေ မလာသေးလို့ - ငရုတ်သီးတွေပဲရှိတယ်... စားရင်စားထားနှင့်လေ)
အားမနာနဲ့နော် အများကြီးပဲ စားသွားကျ။ မဝသေးရင်ထပ်မှာ။ ကိုယ့် $_$ နဲ့ ကိုယ်။ :D
(ဒါက တယောက်စာ ပန်းကန်- အဖုံးအုပ်ထားတဲ့ ဖန်ခွက်ကလေးက ရေနွေးပန်းကန် ဘေးနားက ကြွေပန်းကန်လုံးလေးထဲကို ငှဲ့ငှဲ့သောက်ရတာ။ ကုန်သွားရင်လာထပ်ဖြည့်ပေးတယ်- သူလဲ Herbal တွေနဲ့ပဲ၊ အရသာက ချိုချိုလေး)
အောက်ကပုံတွေက တယောက်စာ၊ ဟင်းတွေက ၁ ပွဲမှာလိုက်တယ်ဆိုရင် ဒီတဝိုင်းလုံးမှာ ရှိတဲ့ လူအရေအတွက်အလိုက် ပန်းကန်ပြားတွေနဲ့ တယောက်ချင်းဆီကို တယောက်စာ တယောက်စာ ခွဲပေးပြီးမှ လာချပေးတာ။ လုစားစရာမလိုဘူး :)
(ဒါက Sea cucumber ကို brocoli နဲ့ Herbal တွေနဲ့- မဆိုးဘူး)
(ဒါက ငါးနဲ့ ကြွက်နားရွက်မှိုနဲ့ ဒါလဲ herbal နဲ့ ချက်ထားတာပဲ)
(ဒါက Shark fin ရယ်၊ ကြက်သားရယ် Herbal တွေနဲ့ Soup လေ)
(ဒါက Abalon တဲ့ ဈေးအရမ်းကြီးတယ်။ NTUC မှာ ၃ ကောင်ပဲ ပါတဲ့ စည်သွတ်ဘူးတဘူးကို $80 လား၊ $85 လားပဲ။ - မြန်မာလို ဘာခေါ်လဲတော့ မသိဘူး။ သူ့ပုံကို ပူးတေ အောက်မှာတွဲထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ဒါကပူးတေအတွက်လာချတဲ့ ပူးတေရဲ့  quota .. ဒါပေမယ့် ပူးတေ မစားဘူး ကြောက်လို့ )
(Abalon) - ပူးတေတို့က live တွေမှာစားတာမဟုတ်ဘူးနော် internet က ဓါတ်ပုံ
(ဒါက Abalon စည်သွတ်ဘူးလေ-NTUC တို့ ColdStorage တို့မှာ ရှိတယ်)
(ဒါက နောက်ဆုံး ဟင်းတွေနဲ့ ဗိုက်မဝသေးရင် ခေါက်ဆွဲကြော်)
ခေါက်ဆွဲကြော် တပွဲမှာပြီးခွဲလိုက်တာ တယောက်ကို နဲနဲဆီပဲ ရတယ်။ ပိုတာသူတို့ စားလိုက်လားမသိဘူးနော်။ :P နောက်တာ။ ပူးတေတို့ လူအုပ်တင်မနဲဘူးပဲ
(ဒါကနောက်ဆုံးပိတ် အချိုပွဲ- စားကောင်းတယ်။ အအီပြေတယ်)
(ဒီပုံလေးက မစားခင် အချိုပွဲ- သူငယ်ချင်းတို့အတွက် သတိရလို့)
(ဒါလေးကလဲ Sun set ကို ခံစားထားတာ)
( ဒါက ဆန်တိုစာ(Sentosa) ဘက် သွားတဲ့ လမ်း ကို လှမ်းရိုက်ထားတာ။ )
(ဒါက ရေထဲက သင်္ဘောတွေ- တခြားဘလော့ဂါတွေကို အားကျလို့ လိုက်ရိုက်လာတာ :D)
သူငယ်ချင်းတို့ အားလုံး ဗိုက်ဝသွားကြပြီတင်တယ်။ မဝရင်လဲ နောက်မှ ကျွေးတော့မယ်နော်။ :)
Posted by ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ at 5:00 PM7comments
Labels: ဆားချက်, အကြွား
Fatty Liver(Foie Gras)
Forward မေးလ် ထဲက ရတာလေးကို မျှဝေလိုက်တာပါ။ သိပြီးသားလူတွေလဲရှိမှာပါ။ မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက်ပါ။ ဖတ်ပြီးရင်ထဲမှာ တော်တော်လေး မချိအောင် ခံစားရပါတယ်။
အစားလေးတလုပ်အတွက်နဲ့ လူတွေဒီလောက်ထိအောင် ဆိုးရွားနေကြပြီလားလို့လဲ တွေးရင်း နောက်ပိုင်းတွေ ဘာတွေ တီထွင်ပြီး လုပ်စားကြလေဦးမလဲလို့
စီးပွားရေးသမားတွေက ဒါတွေထုတ်တယ်ဆိုတာ Demand လဲရှိနေလို့ပါ။ အရင်က ပူးတေ soft shell crab ကို အရမ်းကြိုက်ခဲ့တာ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာ ပူးတေသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း မစားရက်တော့ဘူး။ လုံးဝကို မစားတော့တာပါ။ ခုလဲ ဒီ Foie Gras လို့ခေါ်တဲ့ Fatty Liver (မြန်မာလိုဆိုရင် အသဲအဆီဖုံး လို့များခေါ်မလားမသိဘူးနော်) ကိုလဲ ပူးတေ ခုထိ တခါမှ မစားဖူးသေးပါဘူး။ ဒီမေးလ်ကို မဖတ်ရသေးခင် Foie Gras ကို စမ်းစားကြည့်မိရင် စားမိခဲ့လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ခုတော့ လုံးဝ စားဖို့ကို အစီစဉ်မရှိတော့ဘူး။
အစားလေးတလုပ်အတွက်၊ ဒီအစားလေး ကိုယ်မစားလိုက်ရတော့ကော ဘာဖြစ်သွားမလဲနော်။ သူတို့ကတော့ မချိမဆန့်ကို ခံစားပြီး သေပွဲဝင်သွားကြရရှာတာ။
ပူးတေ မြန်မာလို ပြန်ရေးလိုက်ရင်ပေါ့သွားမှာဆိုးလို့ ဒီအတိုင်းလေးပဲ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်...
သူငယ်ချင်းတို့လဲ ပူးတေလို မဟုတ်တောင် အလားတူ ခံစားချက်များရှိကြမယ်လို့ ပူးတေ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ တယောက်တဆင့် လက်ဆင့်ကမ်းရင်း ဒါလေးကို ဖြန့်ဝေနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အားလုံးရပ်တန့်သွားအောင်မလုပ်နိုင်တောင် သူတို့လေးတွေအားလုံးရဲ့  အသက်ကို ပူးတေတို့ မကယ်နိုင်ပေမယ့် သူတို့လေးတွေ အနည်းငယ်ရဲ့ အသက်ကို ကယ်ရာရောက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မသိပဲနဲ့ စားလိုက်တဲ့လူမှာ ရရှိလာမယ့် အကုသိုလ် မရရှိအောင် ဒီနေရာလေးကနေ မျှဝေလိုက်တာပါ။
Forward မေးလ် ပို့ပေးတဲ့ မောင်လေးကိုလဲ ဒီနေရာကနေ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
so terrible to know about this following............
These people, I mean would to eat this, would to sell this, would to force to do so. and especially the one who invented or find out this must go hell.............
ฟัวกราส์ ( Foie Gras)
It's very very luxury menu that originally from France
But this dish comes from feedingagoose OVERLOADED to make the goose has FATTY LIVER DISEASE.
Let's see the source of this wonderful dish
The geese are forced to eat.. even it doesnt desire
The metal pipe pass though throat to stomuch ...even it doesnt want to eat anything
To make the liver being bigger and fatter
Every cages force the geese either can not turn up their body or move up.
ดูแววตาแห่งความสุขผมสิ How sad their eyes show up
The left who survive have crapped to be inflamed asses..blood easily come up with the shit
Not only mouth hurted, throat hurted , all time stomuchache from the food , Fat to bloated legs , no sleep , no excercise But also unfreedom life to see the sky or river
To get the beautiful and white liver that unusual big like this
และเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ทำอะไรให้นึกถึงจิตใจคนอื่นบ้าง อย่าเห็นประโยชน์ส่วนตน เอาแต่ผลประโยชน์ของเค้าเข้าตนเอง คนอื่นเดือดร้อนไม่สน ทุกคนมีศักดิ์ มีชีวิต มีจิตใจ มีคุณค่า ของเค้าเหมือนๆคุณ แม้เค้าไม่มีเท่าคุณ อย่าเบียดเบียนกันขนาดนี้เลยท่าน (เจ้านาย..อิอิ)
Stop being selfish to make predation from now on please, every single life also has their mind their value.
Please forgive me about this poor English, I tried my best and no time to revise it. Kindly revise it before you help to forward it out.
အနန္တသတ္တဝါအပေါင်း ချမ်းသာသုခ ပြည့်စုံပါစေ။
သတ္တဝါ အချင်းချင်းနှိပ်စက်ခြင်း ကင်းဝေးကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်းနဲ့သာ...
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ အမှားပါခဲ့ရင်လဲ ပူးတေ အမှားများသာဖြစ်ပြီး နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့.....
Posted by ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ at 3:10 PM0comments